Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaal Ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex maray Muqdisho. | XAL DOON
Home NEWS Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaal Ciidamo ka wada tirsan dowladda ku...
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaal Ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex maray Muqdisho.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasoo gelinkii danbe ee maanta ku dagaalamay Suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir.
Sida wararku sheegayaan Ciidamada booliska iyo askar kale oo dhac u geysaneysay Shacab u soo ciid doontay Suuqa Xamarweyne, ayaa dagaal kooban dhexmaray, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Taliye Kuixgeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Jeneraal Zakiya Xuseen Axmed, ayaa Bareheeda Bulshada ku soo qortay in laamaha amaanka ay gacanta ku soo dhigeen Saddex kamid ah askartii dhaca u geysaneysay Shacabka ee askarta la dagaalantay.
“Ciidamada boliiska degmada X/Weyne ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan 3 burcad hubeysan oo dhacaayay shacabka suuqa ka soo doontay adeega ciida. Burcadka ayaa dagaalamay,” ayey tiri Zakiya.
Waxa ay sheegtay in dagaalka oo Xoogganaa ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo Sadex kamida ay Shacab yihiin, halka qofka kalena uu Burcad yahay, waxaana geeriyooday hal qof oo Shacab ahaa.
“israsaaseyn ka dib sadaxdii burcad oo mid dhaawac yahay ayaa gacanta lagu dhigay. Sadax shacab ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray hal kalena ku dhintay israsaaseynta burcadka oo galay goob dukaan” ayey hadalkeeda ku soo xirtay Taliye Zakiya.
Si akstaba, waa qofkii 2-aad oo Shacab ah oo ay Ciidamada amaanka dilaan maanta oo kaliya, iyadoo duhurnimadii maantana uu askari Boolis ah Kontoroolka Seybiyaano uu ku dilay Darawal Gaari Hommey ahaa.